Huawei: Android Pie မှာဘက်ထရီကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Androidsis
Android Pie ဖြင့် Huawei ဘက်ထရီကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
အက်ဒါဖာရီနို | | ဘက်ထရီ, Android cheat
Android Pie ကိုမိတ္တူကူးထားသည့် Huawei ဖုန်းများ၊ အမျိုးမျိုးသောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုရွေးချယ်စရာနှင့်အတူတွေ့ရှိရသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဖုန်းမှာအမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့စားသုံးမှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွင်ဘက်ထရီအားကုန်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ကောင်းမွန်သောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။ EMUI အသုံးပြုမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နောက်တစ်နည်းမှာ၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကုတ်အင်္ကျီ.
EMUI နှင့် Android Pie တို့တွင် Huawei တွင်ဤဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်ဒါပေမယ့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့အများအပြား mode ကိုရှိသည် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Android တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Huawei ဖုန်းအသုံးပြုသူများစွာအတွက်စဉ်းစားရန်ကောင်းကောင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
1 Huawei တွင်ဘက်ထရီပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း
2 ပါဝါချွေတာ mode ကို
ဒီ Battery Optimization Option ကို Android Pie နဲ့အတူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ Huawei ဖုန်းချိန်ညှိချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ထရီအပိုင်းအတွင်းဤအခွင့်အရေးရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသောအခါအဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သည်မှာဖုန်းတွင်လက်ရှိလည်ပတ်နေသောအချို့ဖြစ်စဉ်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်၊ device ကိုအပေါ်ပါဝါစားသုံးနေကြသည်.
ဤနည်းအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောအလိုအလျှောက်ထပ်တူအဖြစ်ဖြစ်စဉ်များဥပမာအားဖြင့်ဖုန်းအားစွမ်းအင်ချွေတာရန်၎င်းတို့အားပိတ်ထားနိုင်သည်။ ထို option ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ထိုအချိန်တွင်မည်သည့်ဖြစ်စဉ်များကိုပိတ်နိုင်သည်ကိုစတင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဤရွေးချယ်စရာများကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ချင်သည်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
နောက်ခံအနက်ရောင်သည် Android တွင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသက်သာစေသလား။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဖုန်းကိုဘက်ထရီသက်သာစေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်သောစွမ်းအင်ချွေတာမှုနည်းလမ်းများကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ Android Pie တွင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကို Huawei ဖုန်းတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပါဝါချွေတာ mode ကို
Android Pie ပါသည့် Huawei ဖုန်းများသည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (သို့) စွမ်းအင်ချွေတာမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Android Oreo တွင်ရရှိနိုင်သည့် mode စုံတွဲတစ်တွဲရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းသုံးခုအထိတိုးလာသည်။ ၎င်းသည်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ စားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ဤပထမသုံးခုအကြောင်းနှင့်သူတို့ဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာပြောပြပါမည်။
အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် mode ကိုဖြေ - ဒါကစုဆောင်းမှုကိုမပံ့ပိုးပေးပေမယ့်ဘက်ထရီကိုပိုပြီးမြန်မြန်သုံးစွဲလိမ့်မယ်။ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei စမတ်ဖုန်းကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်အလုပ်လုပ်စေသည်။ ၎င်းရဲ့စွမ်းအားကိုအမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်ထားပြီးဖုန်းကိုအလွန်အမင်းပူနွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Fortnite ကိုကစားလျှင်ငါတို့သုံးနိုင်သည်။
စွမ်းအင်ချွေတာသုံးစွဲခြင်း: Android Pie တွင်ပါ ၀ င်သောစွမ်းအင်ချွေတာရေးစနစ်။ ဤနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါကဖုန်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နောက်ခံတွင်ရှိသောဖုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းကိုပိတ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်စနစ်အသံများကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အနိမ့်ဖြစ်ချိန်တွင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုအထိလုံလောက်သောရာခိုင်နှုန်းကျန်ရှိသည်။
Ultra ပါဝါချွေတာခြင်းမုဒ်ဖြေ - စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ mode၊ ဖုန်းကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနိမ့်ဆုံးအထိလျှော့ချပေးပြီး၊ လုပ်ငန်းသုံးလုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်အနည်းငယ်ကိုသာထားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် SMS ကိုခေါ်ဆိုရန်နှင့်ပေးပို့ရန်အတွက်အသုံးပြုနိူင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ထရီအလွန်နည်းပါးသောအချိန်တွင်သုံးစွဲမှုကိုအများဆုံးအထိလျှော့ချလိုသည့်အခါပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်း၏ပုံမှန် mode နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘက်ထရီသက်တမ်းသည်သုံးဆဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဤစွမ်းအင်ချွေတာသည့်နည်းလမ်းများကိုသုံးပါ Android Pie ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei ဖုန်းပေါ်တွင်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီအားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ပါက၎င်းတို့ကိုအနည်းငယ်ညှစ်ရန်အမြဲတမ်းလှည့်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးပါက၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android cheat » Android Pie ဖြင့် Huawei ဘက်ထရီကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ယခုလတွင်၎င်း၏ cryptocurrency ကိုစတင်နိုင်သည်
Asus ZenFone6သည်အဓိကကင်မရာအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်